कोरोना संक्रमणलाई २ करोड ६६ लाख जनाले परास्त पारे
काठमाडौं : विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ३ करोड ५४ लाख ४ हजार पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २ लाख ६९ हजार भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थप भएका छन् । यस्तै, मृत्यु हुनेको संख्या पनि १० लाख ४१ हजार ८६२ पुगेको छ । हालसम्म २ करोड ६६ लाख ३० हजार भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ७६ लाख ३६ हजार ९१२ पुगेको छ । यहाँ हालसम्म २ लाख १४ हजार ६११ हजार जनाको मृत्यु भएको छ ।
भारतमा हालसम्म ६६ लाख २३ हजार ८१५ संक्रमित हुँदा १ लाख २ हजार ७१४ जनाको मृत्यु भएको छ । ब्राजिलमा हालसम्म ४९ लाख १५ हजार २८९ जना संक्रमित हुँदा १ लाख ४६ हजार ३७५ जनाको मृत्यु भएको छ । रुसमा १२ लाख १५ हजार १ संक्रमित हुँदा २१ हजार ३५८ जनाको मृत्यु भएको छ । कोलम्बियामा ८ लाख ५५ हजार ५२ संक्रमित हुँदा २६ हजार ७१२ जनाको मृत्य भएको छ । पेरुमा ८ लाख २८ हजार १६९ जना संक्रमित हुँदा ३२ हजार ७४२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्पेनमा संक्रमितको संख्या ८ लाख १० हजार ८०७ पुगेको छ भने ३२ हजार ८६ जनाको मृत्यु भएको छ । अर्जेन्टिनामा ७ लाख ९८ हजार ४८६ संक्रमित हुँदा २१ हजार १८ जनाको मृत्यु भएको छ । मेक्सिकोमा ७ लाख ६१ हजार ६६५ जना संक्रमित हुँदा ७९ हजार ८८ को मृत्यु भएको छ । साउथ अफ्रिकामा ६ लाख ८१ हजार २८९ जना संक्रमित हुँदा १६ हजार ९७६ जनाको मृत्यु भएको छ । फ्रान्समा ६ लाख १९ हजार १९० संक्रमित हुँदा ३२ हजार २३० जनाको मृत्यु भएको छ ।
यता, बेलायतमा हालसम्म ५ लाख २ हजार ९७८ जना संक्रमित रहेका छन् ४२ हजार ३५० जनाको मृत्यु भएको छ । चिलीमा ४ लाख ७० हजार १७९ जना संक्रमित हुँदा १२ हजार ९७९ को मृत्यु भएको छ । इरानमा ४ लाख ७१ हजार ७७२ जना संक्रमित हँदा २६ हजार ९५७ जनाको मृत्यु भएको छ । बंगलादेशमा हालसम्म ३ लाख ६८ हजार ६९० जना संक्रमित हुँदा ५ हजार ३४८ को मृत्यु भएको छ । साउदी अरबमा ३ लाख ३६ हजार ३८७ हजार संक्रमित हुँदा ४ हजार ८७५ जनाको मृत्यु भएको छ । '
पाकिस्तानमा ३ लाख १४ हजार ६१६ संक्रमित हुँदा ६ हजार ५१३ जनाको ज्यान गएको छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म ८६ हजार ८२३ जना संक्रमति फेला पर्दा ६४ हजार ६९ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । ५३५ जनाको भने मृत्यु भएको छ ।
चीनमा पछिल्लो २४ घण्टामा २० जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । त्यहाँ हालसम्म ८५ हजार ४५० जना संक्रमित हुँदा मृतकको संख्या ४ हजार ६३४ छ । जापानमा ८५ हजार ३३९ जना संक्रमित हुँदा १ हजार ५९७ जनाको ज्यान गएको छ ।
गणपति लघुवित्तको मूल्य समायोजन
नेसनल माइक्रोफाइनान्सको २१% बोनस सेयर समायोजनपछिको भाउ कति ?
सेयर बजारमा करेक्सन, किन घट्यो नेप्से ?
अब आइपीओ रिजल्ट अनलाइन मिडियाबाट हेर्न नपाइने
एनआइबीएल एसका ३ वटै फन्डको न्याभ बढ्यो, सेयर लगानी कति ?